कर, डर होइन रहर हो, गौरब लायक कुरा हो : करदाता सेवा प्रमुख बुढाथोकी | Purnapusti
नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नु राष्ट्रप्रतिको एक महत्वपूर्ण योगदान हो । नागरिकले कर नतिर्ने हो भने राष्ट्र सञ्चालनमा आर्थिक पक्षले ठप्प हुन्छ । त्यसको सट्टा राष्ट्रले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा र विकास दिनुपर्दछ । यस यिनै कुरामा नागरिक र राष्ट्रबीचको बुझाई, व्यवहारमा निकै ठूलो खाल्डो छ । ति बुझाई र ब्यवहार कहाँनिर छ । के गर्दा पुरिन्छ । यिनै सन्दर्भमा करदाता सेवा कार्यालय गाईघाटका प्रमुख सुमन बुढाथोकीसंग गरिएको संवाद प्रस्तुत छ ।
यसको भिडियो हेर्नका लागि यो लिंक खोल्नुहोस् : https://www.youtube.com/watch?v=qLGMUEUk0tY
पूर्णपुष्टि : करदाता भन्नाले को हो ?
प्रमुख बुढाथोकी : राज्यलाई योगदा स्वरुप ज–जस्ले आफुले आय आर्जन गरे अनुरुप आयको क्षताको आधारमा राज्यलाई निश्चित रकम तिर्नु हुन्छ, उहाँहरु करदाता हुनुहुन्छ । उहाँले तिरेको रकमलाई हामीले कर भन्ने गर्दछौँ । जस्तले कर तिर्छ उहाँ नै करदाता हुन् ।
पूर्णपुष्टि : सवै नागरीक नै करदाता हुन् भन्न मिल्छ कि मिल्दै ?
प्रमुख बुढाथोकी : त्यो मिल्छ किन भने हामीले उपभोग गर्ने सामाग्रीहरुमा पनि केहि न केहि रुपमा हामीले कर तिरहेका हुन्छौँ । जस्तो ः बजारबाट खाने कुराहरु ल्याउँछौँ । दाल, चामल, तेल, चिनि त्यस्ता कुराहरुमा निश्चित मात्रामा कर जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसको उपभोगको लागि कर नै जोडिएर आउने भएका हुनाले हामी सवैले कर तिरेको भन्न सकिन्छ ।
पूर्णपुष्टि : नागरीकहरुमा कर शिक्षा अलिक कम भएको महशुुस हुन्छ ? कतिपयले कर भनेको नै बुझ्दैन । यसलाई सहज ढंगले कसरी बुझ्ने ?
प्रमुख बुढाथोकी : राज्य र सरकार भनेको जनतालाई सेवा दिनका निम्ति स्थापना भएको हुन्छ । सरकारले नागरीकलाई सेवा र विकास दिने क्रममा निश्चित रकम वा अर्थको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रिय बजेटको रुपमा विभिन्न आर्थीक, सामाजिक विकास गर्ने हिसावले राष्ट्रिय बजेटको रुपमा आएको हुन्छ । र त्यो बजेटलाई पुर्ती गर्नका निमित रकम आवश्यक पर्दछ । राज्यको निमित पैसा तिरेका हुन्छौ । राज्यको निमित जुन बजेट मार्फत हाम्रै निम्ति त्यो खर्च भएर आएको हुन्छ । त्यसो भएको हिसावले जेट भनेको हामै्र लागि राज्यले खर्च गर्नका लागि, हामीलाई नै सेवा दिने हिसावले प्राप्त हुने भएकाले वास्तवमा यो कर्तव्य पनि हो । र सवै नागरिकहरुको कर तिर्ने दायित्व हो । र तिनु पनि पर्छ ।
पूर्णपुष्टि : करको अवस्था कस्तो छ ? उदयपुर जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गरौँ न ?
प्रमुख बुढाथोकी : अघिल्लो आर्थीक वर्षमा करिब ४४ करोड राजस्व संकलन भएको अवस्था हो । त्यो अघिल्लो आर्थीक वर्षमा ३० करोड उठेको थियो । लक्ष्य अनुसार एक सय ४४ प्रतिशत हासिल गरेका थियौँ । अर्थात १४ करोड बढी उठाउन सफल भएका थियौँ । यस हिसावले हेर्ने हो भने राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ र राज्यले गर्ने हरेक विकास र सेवाको निम्ति हाम्रो पनि केहि सहयोग हुनु पर्छ । भन्ने हिसावले कर सहभागितामा याहाँ राम्रो सहभागिता रहेको पाएको छु । उदाहरणको रुपमा हाम्रो कार्यालयमा सेवा लिन आउनेको संख्या बढेको छ । सेवा कसरी लिने, कर कसरी तिर्ने, भ्याट भनेको के हो, कहिले तिर्नु पर्छ जस्ता कुराहरु सोध्नु हुन्छ । यस कुराले हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्यौँ कि भन्ने पनि लागेको छ । उदयपुरमा कर शिक्षा बढ्दै गएको आभास भएको छ ।
पूर्णपुष्टि : कतिपयले करलाई डरको रुपमा पनि लिएको पाईन्छ ?
प्रमुख बुढाथोकी : एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न रहेको छ । यसलाई मैले सहजरुपमा लिएको छु । कम कारोबार हुने व्यावसायीहरु पनि सामान्य २५ सय भन्दा बढी आय कर तिर्नु पर्दैन । तर त्यहि कर तिर्नु पनि उहाँहरु लाखौँ तिर्नु पर्ने हो कि भन्ने हिबासले उहाँहरु डराउनु हुन्छ । कर भन्ने वितिकै बढी तिनु पर्ने हो कि विभिन्न बाधा, व्यवधान, उल्झन हुने हो की भन्ने एक किसिमको भ्रम छ । म आएपछि थुप्रै कर शिक्षा कार्यक्रम भएका छन् । त्यसमा मैले भन्ने गरेको छु, कर सम्बन्धि कुनै जिज्ञासा भए सिधै कार्यालयमा आउनु होला वा कार्यालयमा फोन गर्नु होला भनेर मेरो फोन नम्बर पनि दिएको छु । तेस्रो पक्षहरुबाट आएमा उनिहरुले भ्रमको खेति गर्न सक्ने आशंका मलाई छ । त्यसैले यस मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु सिधै कार्यालयमा आएर बुझ्न सक्नु हुन्छ ।
हामीले एउटा कुरा के चै बुझ्न जरुरी छ भने राज्यलाई कर तिर्नु भनेको आफुले गौरब गर्ने विषय हो । किन कि करबाट संकलन रकम हाम्रै सेवा र विकासका निम्ति खर्च हुन्छ । राज्यले दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता कुरामा खर्च भइरहेको हुन्छ । तसर्थ आत्म सन्तुष्टि र गौरबको रुपमा लिएर कर तिर्नु पर्छ ।
अर्को तर्फ उहाँहरुलाई कर तिर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ, हामी कर्मचारीहरुले बनाउनु पर्छ । उहाँँहरुलाई विना त्रास कर रहरले तिर्ने बनाउनु पर्छ । सोहि हिसावले सम्झाउने बुझाउने र छोटो समय र कम खर्चमा कर तिर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । यहि हिसावले मैले हाम्रो कार्यालयबाट सेवा दिने र कार्र्ययोजना बनाई रहेको अवस्था छ ।
पूर्णपुष्टि : त्यसो भए कर एउटा वातावरण बन्दै गएको छ ?
प्रमुख बुढाथोकी : पक्कै पनि र कस्तो–कस्तो कर तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा, रोजगारीको आय, व्यवसायको आय, लगानीको आयमा कर तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
पूर्णपुष्टि : करदाता सेवा कार्यालय गाईघाटले भावि दिनमा गर्ने थप सेवा सुविधा केहि छ कि ? भएकैलाई प्रभावकारी बनाएर लाने हो ?
प्रमुख बुढाथोकी : हाम्रो मुख्य काम सेवा नै हो । करदातालाई कसरी हुन्छ छिटो छरितो सेवा दिने नै हो । दोस्रो राज्यलाई तिरिने कर संकलनको काम हो । र अर्को करको विषयमा जनकारी दिने उद्देश्यले कर शिक्षाको काम पनि यस भित्र पर्दछ । अन्यमा बजार अनुगमन जस्ता कार्यक्रमहरु पनि राखेका छौँ ।
पूर्णपुष्टि : कर तिरेन भने नाती पनातिको पालासम्म पनि राज्यले छोड्दैन भन्ने कुरा के हो ?
प्रमुख बुढाथोकी : राज्यलाई तिर्नै पर्ने कर तिरिएन भने भविष्यका पुस्तालाई पनि तिर्ने दायित्व हुन्छ । त्यो कुरा सहि हो । तर अस्ति जेष्ठ १५ पछाडी सरकारले सवै नागरिकले प्यान नम्बर लिनु पर्ने एउटा नीति ल्याएको छ । यसमा रमाईलो पक्ष के छ भने ब्यक्तिगत प्यान बनाउनेको चाप बढेको छ । धेरै जस्तो उहाँहरु प्यान कार्ड बनाएपछि कर तिर्नु पर्छ भन्ने भ्रम छ । तर यसालाई म प्रस्ट पार्न चाहन्छु, प्यान कार्ड बनाउँदैमा कर तिर्नु पर्ने हैन । त्यो भने एउटा परिचय पत्र जस्तो मात्रै हो । जस्ले प्यान कार्ड लिएको छ, उस्ले आम्दानी अनुसारको कर तिर्ने हो । कर तिरेको पैसा प्यान नम्बरमा जम्मा भएर बस्छ । अहिले फोकस गरेको कुरा के हो भने आय आर्जन हुनेहरुले प्यान कार्ड बनाएर राज्यालाई निश्चित प्रतिशत कर तिरिन्छ भने सो कर आफ्नै प्यान कार्डमा जम्मा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसावले पनि फाईदाजनक हुन्छ । मैले अवको ५० वर्षपछि राज्यलाई कति कर तिरे, त्यो रेकर्ड त्याहा हुन्छ । राज्यले भविष्यमा सेवा सुविधा त्यहि तिरेको करको आधारमा दिने नीति आयो भने त्यसको फाईदा त आफैलाई हो । या सबै नागरिकको हकमा सम्भव छ । त्यो बनाउन धेरै गाह्रो छैन, ५ देखि १० मिनट भित्रमा प्यान कार्ड बनाई दिन्छौँ ।
पूर्णपुष्टि : अहिले ८ औँ कर दिवस चलिरहेको छ, यसै अवसरमा गाईघाटमा पनि एक विशेष समारोह भयो । सप्ताह व्यापी कार्यक्रम पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ । यो किन र के–के गर्दै हुनुहुछ ?
प्रमुख बुढाथोकी : मुख्य कुरा कर तिर्नु आफ्नै लागि हो भन्ने कुरा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ, त्यसका लागि यस्ता कार्यक्रमहरु गर्नु आवश्यक छ । सप्ताह व्यापी कार्यक्रमको क्रममा आज मंसिर १ गते बिहान ¥यालि तथा उत्कष्ठ करदाताहरुलाई सम्मानसहित विशेष समारोह सम्पन्न ग¥यौँ, भोली उद्योग बाणिज्य संघ र कर कार्यालय विच मैत्रिपूर्ण फुटबल प्रतियोगीता राखिएको छ भने अन्तिममा कर सम्बन्धि क्याम्पस स्तरिय हाजिरि जवाफ पनि गर्दैछौँ । र आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानमा समापन गर्दै छौँ । आगामी पौषदेखि नयाँ ढंगले विद्यालयका विद्यार्थी मार्फत अभिभावकलाई कर बारेमा जानकारी दिने कार्य पनि अगाडी बढाउने छौँ ।
एक हप्ताको लागि बजार पसल बन्द गर्ने उद्योग बाणिज्य संघको निर्णय
आज डलरको भाउ आकाशियो
अग्नी पिडित राईलाई आर्थीक सहयोग
आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर